Wadamada Midowga Africa oo isku dayaya dhisida maxkamada caalami ah. | Starfm.co.ke	Saturday, May 18th, 2013	Home
Wadamada Midowga Africa oo isku dayaya dhisida maxkamada caalami ah.
Share28.June.2012:- Wadamada midowga Africa ayaa ku guda jira qorshe ku aadan dhisidda maxkamad qaada danbiyada caalamiga ah taasi oo saldhigeedu yahay magaalada caruusha ee dalka Tanzania.
Wakiilka dowlada dalka Kenya u fadhiya midowga Africa Dr Monica Juma ayaa waxauu sheegay in qorshaha lagu dhisayo maxkamadaasi qaadi doonta danbiyada caalamiga ah uu bilawday islamarkana 54 wadan ee qaarada Africa ay ka shaqaynayaan sidii loo hirgalin lahaa maxkamadani.
Mr Juma aya sheegay in xeer ilaaliyayaasha wadamada africa ay kulan yeesheen bishii aanu soo dhaafnay iyaga oo ka baaraandagayay qaabka iyo wadadii loo mari lahaa dhisida maxkamadaasi .
Ururka Midowga Africa ayaa u ololaynaya asaasida maxkamad caalami ah oo qaada danbiyada dagaalka ,xasuuqa iyo danbiyada ka dhanka ah bina’aadaninimada .
Hogaamiyayasha Africa ayaa ka Amaan baxay maxkamada caalamiga ah ee ICC iyaga oo ku eedeeyay in ay bartilmaamedsanayso oo kali ah Africanka.